soavaly lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Soavaly lalao ho an'ny ankizivavy
Ho lehibe ny manana ny tranon, izay miaina ao mafana tsoavaly tsara tarehy soavaly sy ny soavaly kely. Izany no hany fahafinaretana eo amin'ny fiainana dia tsy misy ny olona maro, fa ny milalao lalao maimaim-poana amin'ny aterineto Soavaly afaka isan'andro, fara fahakeliny. Ianao no misy ny hividy amin'ny fivarotana zavatra noho ny soavaliny mba handray anjara amin'izy ireo eo amin'ny volon-koditra, niangaliana fatratra ny manes ary na dia ampiharina amin'ny vatana ny mahafatifaty sary. Afaka milalao ao amin'ny fitadiavana, manangona rakitry ny ela sy ny manao asa hafa na hihaino tsara tarehy duet vociferous soavaly. Mikarakara azy ireo ihany koa tafiditra ao anatin'ny dingana, ka hiandry biby fiompy sy manadio ny tranon.
Fikarakarana fiaramanidina sy fiaramanidina
Ombimanga: mifono zava-miafina ala
Fanahy: Reite Los!
Créez votre Horse
Avy amin'ny Saddle
Dora sy ny Namana Legendan'ny soavaly very
Soavaly: Nafenina Fahasamihafana
Mpitandro filaminana Callie jiolahy Lehibe Round-Up
Fanahy Wild And Frei: Musik Galopp
Mandositra ny sarety
Fialana soavaly diary
Fiofanana momba ny hazakazaka fanahy
Fambolena soavaly Lucky's
The grobe Pferderennen
Lalao Horses tamin'ny Category:
Farany Soavaly lalao ho an'ny ankizivavy
Lalao Online Rehetra soavaly lalao
tsara tarehy soavaly
maro ny ankizivavy nofy ka hitanao ny soavaly na ny kely na ny mitaingina azy pony amin'ny alalan'ny tsahan'i, combing ny volo sy ny rambony. Ao amin'ny tontolo virtoaly, ireo nofinofy dia tena mora ho fampiharana: ao amin'ny ordinatera ny tovovavy lalao soavaly no nofantenana mba hifanaraka tiany rehetra, ary ny tanora vehivavy, ny manao asa isan-karazany. Main – avy isan-karazany ny hanana iombonana amin'ny fàfana ny soavaly ny nofy;
Inona no loko no shёrstka? &Nbsp;
ianao mitafy fiadiana tsoavaly sasany, na hamela izany enta-mavesatra izany maimaim-poana? &Nbsp;
Ho sarotra be dia be ny lalao ity karazana tolotra hanao hijery ny pony avy amin'ny animation andian « Finamanana - izany fahagagana ». Afaka ho hohosorana loko loko ao amin'ny kofehy tsirairay ny volo na ny rambo, hamolaka ho eo an tsara tarehy curls, miezaka ny pony tarehy ponchos, handravaka ny kitrony frills dantelina. Ireo no mahafinaritra noho ny soavaly samy hafa. Samy hafa karazana jewelery sy ny akanjo no nifidy, ohatra, fa ny mahafinaritra toy ny ombimanga soavaly, majika, na angano manana elatra soavaly Pegasus.
Games Horse – ny tena fankalazana
Matetika, miaraka amin'ny biby eo amin'ny lalao tokony handravaka sy ny mpitaingina azy, miezaka tao amin'ny Jockey manokana palitao, pataloha, kiraro baoty. Na manao izany ho Amazon mpiady. Maro virtoaly soavaly lalao mba hilalao kokoa ny natiora, tsy afa-po amin'ny fialam-boly fotsiny mpamorona. Ohatra, ny biby dia tsy maintsy ho tsy tapaka aseho amin'ny mihazakazaka, fa raha tsy izany dia halazo sy noloahany. Izany dia tsy maintsy mitaingina handeha ny lavitra amin'ny sakana. Mila mandefa ny soavaly ho amin'ny manaraka sakana, milaza rehefa tokony hitsambikina mba tsy hisamborana ny, fa tsy mba manimba ny fahasalamanao. Araka ny mahazatra, amin'ny fifaninanana toy izany tokony hanao ezaka iray asa – mety ho ny habetsaky ny halaviran-nanarona na handresy ny sakana. Taorian'ny lalao mahafinaritra toy izany momba ny soavaly mila manao manadio ny biby. Mba hanaovana izany, dia hanana borosy manokana izay ilainao vychёsyvat volon'ondry soavaly amin'ny alalan'ny fanesorana azy avy tamin'ny vovoka sy ny tranofiara zavamaniry.
Matetika, dia afaka dia hanasa ny soavaly, ka dia namirapiratra amin'ny fahadiovana ara-bakiteny. Mba hanaovana izany, dia mila ny ho lena, tsara lather, hosasany sombin-javatra, fafanay. Misy ankizivavy lalao ho an'ny soavaly mitaky ny manome fikarakarana tanteraka. Amin'ny biby toy izany Mety tsy hitovy tondro-panjakana, fa izay dia ilaina ny hanatrika. Ohatra, misy mizana ny satiety, rehefa manomboka ny mandà, dia mila mitondra ho amin'ny biby sakafo matsiro. Izany dia mety ho matsiro oats, be ranony vao karaoty na sakafo hafa – matetika ao amin'ny lalao ianao, dia mila mifidy ny sakafo nomena avy amin'ny lehibe napetraka. Ankoatra izany, lalao an-tserasera ho an'ny ankizivavy soavaly mamela ny manome fitsaboana ao amin'ny toeram-pitsaboana, mba hanadio nanaraka azy tany amin'ny tranom-biby. Ny tena mahaliana lalao amin'ny soavaly nangonina ho anao ato amin'ity fizarana ity ny toerana!